Waa maxay dhakhtar? Macluumaad loogu talagalay qaxootiga iyo doolka | USAHello
Waa maxay dhakhtar? Waa maxay nooca dhakhaatiirta u jiraan? Taas oo ka mid ah waa in aad u tagto? Baro nooca dhakhtarkaaga ama bixiyaha caafimaadka in ay soo booqdaan.
Dhakhtar waa qof loo tababaray in lagu daaweeyo dadka jirran. In USA, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka. Americans wac shaqaalaha caafimaadka “daryeel caafimaad bixiyayaasha” ama “bixiyeyaasha caafimaadka.” Kuwani waa dad ku caawini marka aad jiran tahay ama dhaawac.
Waa maxay nooca dhakhaatiirta u jiraan?
Waxaa jira saddex nooc oo ah bixiyeyaasha caafimaadka waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay:
1. bixiyayaasha daryeelka aasaasiga ah
3. adeegyada caafimaad oo degdeg ah
Yaa aad aragto caawimaad ku xirnaan doontaa arrin caafimaad.
bixiyayaasha daryeelka aasaasiga ah (PCPs) siiyaan aasaasiga ah, daryeel maalmeedka iyo adeegyo kala duwan oo caafimaadka shaqsiyaadka iyo qoysaska loogu talagalay dhibaatooyinka caafimaad ee caadiga ah. sida caadiga ah PCP A waa qofka ugu horeeya oo caafimaad aad aragto marka aad qabto dhibaato.
Yaa noqon kara bixiyaha daryeelka aasaasiga ah?
Your PCP laga yaabaa in dhakhtar (sidoo kale loo yaqaan dhakhtar ah ee Maraykanka), kaaliye dhakhtar ama dhakhtar kalkaaliye caafimaad. Dhammaan xubnaha qoyskaaga arki kartaa PCP isku mid ah, ama aad u aragto in tiro ka mid ah dadka oo dhan ku salaysan xarunta caafimaadka ee xaafaddaada. Waxaad arki kartaa PCP isku mid ah oo sannado badan.
Halkan waxaa ku qoran dhowr tusaale oo marka waxaad arki lahayd dhakhtarka qoyskaaga:
waayo caafimaad oo sannadle ah jeeg-up
haddii aad wiilkaaga ama gabadhaada lahaa caabuq dhegta ah
marka aad si fiican u dareemi ma laakiin ma aha in xaalad deg deg ah
haddii aad u baahan yahay si aad u hesho tallaalada si aad u dalbato jinsiyadda
daryeelka ka hortag ah
Sidee baan u heli bixiyaha daryeelka aasaasiga ah?
Waxaa jiri doona bixiyaha daryeelka aasaasiga ah ee bulshada. bulshada intooda badan waxay leeyihiin xarumo caafimaad ama xarumaha caafimaadka. Waxaad codsan kartaa in aan saaxiibbadeeda iyo derisyadeeda: “waxa dhakhtar in aad ku talin karaa?”. Xafiiska dejinta ama mentor sidoo kale kaa caawin waxaad ka heli kartaa dhakhtarka qoyska. Ama waxaad ka eegi kartaa FindHello waayo, daryeel caafimaad bixiyayaasha.
daryeelka ka hortaga
caymiska caafimaadka waxaa laga yaabaa inay bixiyaan faa'iidooyin caafimaad oo ka hortag ah. Isku day inaad u isticmaashaa! Kuwani waa baaritaan iyo barnaamijyo kale oo caawiya in aad joojiso ka dhibaatooyinka caafimaadka. Waxay ka mid ah helitaanka baaritaan ku saabsan caafimaadkaaga, xitaa haddii aadan ku xanuunsan ama aad wax qalad ah ma dareentay. kala duwaan ee baaritaanka caafimaadka (imtixaanada) waxaa laga heli karaa for free. Ogow oo baaritaanka lagu daboolay by ugu qorshaha caymiska caafimaadka.
Waxa laga yaabaa in bixiyaha daryeelka aasaasiga ah kuu soo diri takhasus ah dhaawacyada iyo xanuunada qaarkood. takhasus A waa bixiyaha daryeelka caafimaadka kaas oo diiradda saarayaa nidaamka jirka gaar ah ama qayb ka mid ah jirka. Tusaale ahaan, dermatologist a daryeela maqaarka, dheefshiidka ayaa ah uu xannaaneeyo, waayo nidaamka dheefshiidka, iyo orthopedist ah uu xannaaneeyo, waayo lafaha.
Halkan waxaa ku qoran dhowr tusaale oo marka waxaad arki lahayd takhasus leh:
aad qabto dhibaatooyin caloosha, iyo PCP kuu soo diro imtixaanka
bar ah maqaarka ayaa qaab is beddelay ama midabka
wiilkaaga ama gabadhaada ayaa bilaabay inuu hadlo,
Qaar ka mid ah takhasuska oo kaliya lagu daweeyo carruurta ama odayaasha. badan oo ku saabsan kala duwan ka Baro noocyada kala duwan ee dhakhtarrada laga yaabaa in aad la kulanto in USA.
gudbinta A waa talo ah in aad aragto daryeel caafimaad bixiye kale (takhasus leh, tusaale ahaan). Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad weydiiso PCP gudbin ka hor aad aragto dhakhtar takhasus u leh. takhasuska u baahan yihiin laga yaabo in this ama shirkadda caymiska aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa. U hubso in aad dib u eegto qorshahaaga caymiska caafimaadka si aad u aragto haddii gudbinta waxaa loo baahan yahay ka hor inta ballan takhasus u leh. Sidaas waxaad noqon kartaa hubiyo in aad caymiska dabooli doonaa booqashada.
3. daryeel caafimaad oo degdeg ah
Maxaa dhacaya haddii qof qoyskaaga ka noqdo buka maalintii hore u badatay ama ka weyn isbuucaan? Maxaa dhacaya haddii aad qabto cudur khatar ah oo u baahan daryeel degdeg ah? Samaynta ballan la PCP laga yaabaa in aanay suurto gal. Laakiin waxaa jira meelo kale si ay u helaan gargaar deg deg ah:
daryeelka degdegga ah iyo xarumaha socon-in
daryeelka degdegga ah iyo xarumaha socon-in inta badan saacadaha habeenkii iyo weekend iyo in la siiyo daryeelka dhibaatooyinka caafimaad ee yaryar ballan la'aan. Qaado note of cinwaanada, saacadood furan, iyo macluumaadka rugaha daryeelka degdegga ah kala xiriir dhow in ay meesha aad ku nooshahay.
Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin yar oo aad markii laga yaabo booqo xafiiska daryeelka degdegga ah:
inta lagu guda jiro dhacdada sports ah, wiilkaaga ku dhufan madaxiisa
aad leedahay qufac aad u xun oo aad u malaynayso in laga yaabo in aad qabto infekshan
waaxda gurmadka degdegga ah ee cusbataalka
waaxda gargaarka degdegga ah ee isbitaalka A ee ay daryeel u ah nolosha-halis iyo baahida daryeel caafimaad oo degdeg ah. waaxyada gurmadka degdegga ah intooda badan waxay furan yihiin 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii. U hubso in aad ogtahay meesha iyo macluumaadka ee waaxda gargaarka degdegga ah kala xiriir dhow gurigaaga.
Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin yar marka aad isbitaalka tegi lahaa:
ilmaha ama ilmaha uu leeyahay qandho aad u dheer oo ku saabsan todobaadkan
naagtaada socoto shaqada galay
ninkaaga ayaa jabiyay lugtiisa
Haddii aad qolka deg-deg ah, laga yaabaa in aad wali u leeyihiin in ay sugto dhowr saacadood ka hor inta aanad la arki doonaa dhakhtar haddii aanay ahayn xaalad degdeg ah oo naf-gooyada ah.
adeegyada caafimaad oo degdeg ah
lambarka telefoonka ayaa kaalmo u wacan caafimaad oo degdeg ah waa 911.
USA waxay leedahay nidaam wanaagsan oo adeegyo caafimaad oo degdeg ah. Waxaa ka mid ah daryeelka by gurmadka caafimaad oo tababaran oo Ambalaasyada dadka qaado isbitaallada. adeegyada caafimaad oo degdeg ah inta badan ama booliiska iyo wasaaradaha la dirirka shaqeeyaan. Mararka qaarkood ay maamusho isbitaalada ama shirkado gaar ah.